‘जनतालाई बेसार थेरापी, प्रधानमन्त्रीलाई पाँच करोडको गाडी’ भन्दै गर्जिए कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल – Namaste Dainik
June 23, 2020 July 20, 2020 NamastedainikLeaveaComment on ‘जनतालाई बेसार थेरापी, प्रधानमन्त्रीलाई पाँच करोडको गाडी’ भन्दै गर्जिए कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल
त्यस्तै, डा. रिजालले नेपाल र भारत बिचको सिमा विवादको बिषयलाई सन्दर्भमा लिदैं केही दिनअघि भएको नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी बिचको वैठकलाई अपाच्य बताए । उनले दुई पार्टी बिचको साँठगाठ अपाच्य रहेको बताउँदै भने, ‘यस्तो कुरामा सत्तारुढ दलको ध्यान जान आवश्यक छ । सत्तारुढ दललाई प्रशिक्षण दिने र आन्तिरिकत्यस्तै, डा. रिजालले नेपाल र भारत बिचको सिमा विवादको बिषयलाई सन्दर्भमा लिदैं केही दिनअघि भएको नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी बिचको वैठकलाई अपाच्य बताए । उनले दुई पार्टी बिचको साँठगाठ अपाच्य रहेको बताउँदै भने, ‘यस्तो कुरामा सत्तारुढ दलको ध्यान जान आवश्यक छ । सत्तारुढ दललाई प्रशिक्षण दिने र आन्तिरिक क्षगडा र सत्ता सन्तुलन मिलाउन काम गर्ने कुरा निकै अपाच्य हो ।’
महोत्तरीमा,पोखरीमा डुबेर १६ वर्षीय युवकको मृत्यु।